ဂျူလီယန် Sarong လက်ကိုင်ပဝါတစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်ကို PDF အပ်ချုပ်စံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / ထမီ / ဂျူလီယန် Sarong လက်ကိုင်ပဝါတစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်ကို PDF အပ်ချုပ်စံနမူနာ
categories: ထမီ, အမြိုးသမီးမြား
The Juliana skirt isacarefree, လွယ်ကူတဲ့ဝတ်ဆင်နွေရာသီအင်္ကျီ. ကမ်းခြေပေါ်ရေကူးဝတ်စုံကျော်ကဝတ်ဆင်, or pair withatank top and flip flops to stroll through town. You can leave it loose or tie it on the side likeasarong to change it’s style. The skirt is created fromasingle piece of fabric withawaistband attached. The recommended minimum length for any side of the fabric is 1 metre (the skirt shown in the images uses 1m x 1.4m).
Copyshop အရွယ်အစား: 10စင်တီမီတာက x 58cm
A4 စာမကျြနှာ: 3
Measure the correct length out from the corner where all the folds originate. Ensure to measure along the longer edges of the skirt. Mark the end points on the4folds of the skirt by placing2တံသင်.
Open up the skirt lengthways and carefully snip along the fold between the2တံသင်.
Size 4: 20စင်တီမီတာ
Size 6: 20.5စင်တီမီတာ
Size 8: 21စင်တီမီတာ
Size 10: 22စင်တီမီတာ
Size 12: 23စင်တီမီတာ
Size 14: 24စင်တီမီတာ
Size 16: 25စင်တီမီတာ
Size 18: 26စင်တီမီတာ
ချုပ်, trim and finish the seam allowance using zig-zag or an overlocker stitch.